Mareykanka oo sheegtay duqayn lagu dilay saraakiil katirsan Al-Qaacidda – Radio Daljir
Washington,Feb 25 – Dowladda Mareykanka ayaa sheegatay duqayn diyaaradeed oo shalay lagu dilay saraakiil katirsan ururka Al-Shabaab ee ku biiray ururka Al-Qaacidda.
Sarkaal katirsan dowladda Mareykanka ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP,weerarka ka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose inuu fuliyay mid ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha uusna la socon ee Mareykanka,iyadoona duqaynta lagu dilay xagjiriin Soomaali iyo Kenyan isugu jirtay.
War kasoo baxay dhinaca ururka Al-Shabaab ayaa lagu sheegay,duqaynta ka dhacday gobolka Shabeelada Hoose in lagu dilay Sheekh Abu Ibraahim oo u dhashay dalka Moroko iyo ajnabi kalle oo aan la cadeyn dhalashadiisa.
Duqaynta diyaaradeed ee lagu dilay saraakiisha katirsanaa Al-Shabaab ayaa imaanaysa,xilli bishan ay kooxdu sirasmi ah ugu biirtay ururka Al-Qaacidda.
Al-Shabaab ayaa sidoo kale si qasab ah looga saaray magaalada Muqdisho,kadib markii ay soo wajaheen culays milliteri oo uga yimid sadex jihho.